मत्ती २१ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२१ उहाँहरू जब यरूशलेमनजिकै जैतुन डाँडाको बेथफागे पुग्नुभयो, तब येशूले आफ्ना दुई चेलालाई २ यसो भन्दै पठाउनुभयो: “तिमीहरूले देखिरहेको त्यो गाउँमा जाओ र त्यहाँ पस्नेबित्तिकै तिमीहरूले गधा र त्यसको पाजीलाई बाँधेर राखेको भेट्टाउनेछौ। ती फुकाएर यहाँ मकहाँ ल्याओ। ३ यदि कसैले केही सोध्यो भने, तिमीहरूले यसो भन्नू, ‘प्रभुलाई यी चाहिएको छ।’ अनि उसले तुरुन्तै ती तिमीहरूसित पठाउनेछ।” ४ यसप्रकार भविष्यवक्ताद्वारा भनिएको यो वचन पूरा भयो: ५ “सियोनकी छोरीलाई भन, ‘हेर, तिम्रो राजा तिमीकहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ कोमल स्वभावको हुनुहुन्छ र उहाँ गधामाथि, हो एउटा पाजीमाथि, भारी बोक्ने गधाको बच्चामाथि सवार हुनुहुन्छ।’ ” ६ त्यसपछि, चेलाहरू आफ्नो बाटो लागे अनि येशूले आज्ञा गर्नुभएबमोजिम गरे। ७ तिनीहरूले गधा र त्यसको पाजी ल्याए र तीमाथि आफ्नो लुगा बिछ्याए अनि उहाँ त्यसमाथि बस्नुभयो। ८ तब भीडमा भएकाहरूमध्ये धेरैले आ-आफ्नो लुगा बाटोमा बिछ्याए अनि अरू कतिले चाहिं रूखका हाँगाहरू काटेर बाटोमा फिंजाउन थाले। ९ अनि उहाँको अघि-अघि गइरहेका र पछि-पछि आइरहेका भीडका भीड मानिसहरूले यसो भन्दै जयजयकार गर्न थाले: “दाऊदका छोराको जय* होस्! यहोवाको नाममा आउने धन्यका होऊन्‌! हे स्वर्गमा बस्नुहुने, उहाँको जय होस्!” १० यसरी जब उहाँ यरूशलेमभित्र पस्नुभयो, तब पूरै सहरमा हल्लीखल्ली मच्चियो र मानिसहरूले सोध्न थाले: “यिनी को हुन्‌?” ११ अनि भीडले यसो भन्न थाले: “यिनी गालीलको नासरतका येशू हुन्‌। प्रतिज्ञा गरिएको भविष्यवक्ता यिनी नै हुन्‌।” १२ तब येशू मन्दिरभित्र पस्नुभयो र त्यहाँ किनबेच गरिरहेकाहरू सबैलाई बाहिर लघार्नुभयो। उहाँले पैसा साट्नेहरूको टेबुल अनि ढुकुर बेच्नेहरूको बेन्च पनि पल्टाइदिनुभयो। १३ त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “ ‘मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ’ भनेर धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। तर तिमीहरू यसलाई डाँकुहरूको ओडार बनाउँदैछौ।” १४ साथै, अन्धा अनि लुला-लङ्गडाहरू मन्दिरमा उहाँकहाँ आए र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। १५ जब मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँले गर्नुभएका अचम्मलाग्दा कामहरू देखे अनि “दाऊदका छोराको जय होस्!” भन्दै मन्दिरमा ठिटाहरूले जयजयकार गरेको सुने, तब तिनीहरू रिसाए १६ र उहाँलाई भने: “यिनीहरू के भन्दैछन्‌, के तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ?” येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “सुन्दैछु। के तिमीहरूले धर्मशास्त्रमा कहिल्यै पढेका छैनौ: ‘शिशुहरू अनि दूधे बालकहरूलाई तपाईंले आफ्नो प्रशंसा गर्न लगाउनुभयो’?” १७ अनि तिनीहरूलाई त्यहीं छोडी उहाँ सहरबाट निस्केर बेथानी पुग्नुभयो र त्यहाँ रात काट्नुभयो। १८ बिहान सबेरै सहर फर्कंदै गर्दा उहाँ भोकाउनुभयो। १९ अनि उहाँले बाटोको छेउमा अन्जीरको एउटा रूख देख्नुभयो र त्यसतिर जानुभयो तर उहाँले त्यसमा पातबाहेक केही पाउनुभएन। त्यसैले उहाँले त्यसलाई यसो भन्नुभयो: “तँमा अबदेखि कहिल्यै फल नलागोस्।” तब त्यस अन्जीरको रूख उत्तिखेरै सुकिहाल्यो। २० जब चेलाहरूले यो देखे, तब अचम्म मान्दै सोधे: “यो अन्जीरको रूख कसरी तुरुन्तै सुक्यो?” २१ अनि येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, तिमीहरूसित विश्वास मात्र हुनुपर्छ अनि तिमीहरूले शङ्का गर्नु हुँदैन, तब मैले अन्जीरको रूखलाई जे गरें, त्यति मात्र होइन तर यस पहाडलाई ‘यहाँबाट उप्किएर समुद्रमा खस्’ भन्यौ भने त्यो पनि हुनेछ। २२ तिमीहरूले विश्वाससहित प्रार्थनामा जे-जे माग्छौ, ती तिमीहरूले पाउनेछौ।” २३ त्यसपछि, उहाँ मन्दिरमा पस्नुभयो र त्यहाँ सिकाइरहनुभएको बेला मुख्य पुजारीहरू र धर्म-गुरुहरू आएर उहाँलाई सोधे: “तपाईं कुन अख्तियारले यी सब गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईंलाई कसले यस्तो अख्तियार दियो?” २४ येशूले तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ दिनुभयो: “म पनि तिमीहरूलाई एउटा कुरा सोध्छु। तिमीहरूले मलाई त्यसको जवाफ दियौ भने म कुन अख्तियारले यी सब गर्दैछु, म पनि तिमीहरूलाई भन्छु: २५ यूहन्नाले बप्तिस्मा गराउने अख्तियार कसबाट पाए? परमेश्वरबाट* कि मानिसहरूबाट?” तब तिनीहरू आपसमा यसो भन्दै तर्क गर्न थाले: “ ‘परमेश्वरबाट’ भनौं भने ‘उसोभए, तिमीहरूले किन ऊमाथि विश्वास गरेनौ त’ भनेर उसले सोध्नेछ। २६ ‘मानिसहरूबाट’ भनौं भने हामीलाई भीडसित डर लाग्छ, किनकि तिनीहरू सबैले यूहन्नालाई भविष्यवक्ता मान्छन्‌।” २७ त्यसैले तिनीहरूले येशूलाई यस्तो जवाफ दिए: “हामीलाई थाह छैन।” तब उहाँले पनि तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ फर्काउनुभयो: “म कुन अख्तियारले यी सब गर्छु, म पनि तिमीहरूलाई भन्दिनँ। २८ “तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ? एक जना मानिसका दुई छोरा थिए। जेठोकहाँ गएर तिनले यसो भने, ‘बाबु, जाऊ गएर आज दाखबारीमा काम गर।’ २९ उसले ‘हवस् बुबा,’ भन्यो तर ऊ गएन। ३० अनि कान्छोकहाँ गएर तिनले त्यसै भन्दा उसले ‘नाइँ, म जान्नँ’ भन्यो तर पछि ऊ चुकचुकायो र दाखबारीमा गयो। ३१ यी दुईमध्ये कसले आफ्नो बुबाको इच्छा पूरा गऱ्यो?” तिनीहरूले जवाफ दिए: “कान्छोचाहिंले।” अनि येशूले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, कर उठाउनेहरू र वेश्याहरू तिमीहरूभन्दा अगाडि परमेश्वरको राज्यमा पस्नेछन्‌। ३२ किनकि यूहन्ना आए र तिमीहरूलाई सत्यको बाटो देखाए, तैपनि तिमीहरूले ऊमाथि विश्वास गरेनौ। तर कर उठाउनेहरू र वेश्याहरूले ऊमाथि विश्वास गरे र तिमीहरूले यो देख्दादेख्दै पनि पछि चुकचुकाउँदै ऊमाथि विश्वास गरेनौ। ३३ “अर्को एउटा दृष्टान्त सुन: एक जना घरमालिक थियो, जसले दाखबारी लगाएर त्यसको वरिपरि बार हाल्यो। त्यसपछि उसले दाख पेल्ने कोल खन्यो र एउटा मचान खडा गऱ्यो। अनि मोहीहरूलाई जिम्मा लगाएर आफूचाहिं विदेशतिर लाग्यो। ३४ जब फल टिप्ने बेला भयो, तब उसले आफ्ना दासहरूलाई कुत उठाउन मोहीहरूकहाँ पठायो। ३५ तर मोहीहरूले उसका दासहरूलाई समातेर एक जनालाई कुटे, अर्कोलाई मारे अनि अर्कोलाई चाहिं ढुङ्गाले हाने। ३६ फेरि उसले पहिलेको भन्दा धेरै दास पठायो तर तिनीहरूले उनीहरूलाई पनि त्यसै गरे। ३७ अन्तमा, ‘मेरो छोरालाई त आदर गर्नेछन्‌’ भन्ने सोच्दै उसले आफ्नो छोरालाई पठायो। ३८ तर छोराचाहिं आएको देखेर ती मोहीहरूले आपसमा यसो भन्न थाले, ‘यो त हकवाला हो, त्यसैले आओ, यसलाई मारेर यसको सम्पत्ति हात पारौं।’ ३९ तिनीहरूले उसलाई समाते र दाखबारीबाहिर लगेर मारे। ४० अब, दाखबारीको मालिक आएपछि उसले ती मोहीहरूलाई के गर्ला?” ४१ तिनीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए: “तिनीहरू दुष्ट भएकोले उसले रत्तीभर दया नदेखाई तिनीहरूलाई नाश गर्नेछ र आफ्नो दाखबारी त्यस्ता मोहीहरूलाई दिनेछ जसले समयमै कुत बुझाउँछन्‌।” ४२ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “के तिमीहरूले धर्मशास्त्रमा कहिल्यै पढेका छैनौ, ‘जुन ढुङ्गोलाई डकर्मीहरूले काम नलाग्ने ठाने, त्यही ढुङ्गो नै कुनाको शिरढुङ्गो बनेको छ। यहोवाले त्यसो गर्नुभएको हो र यो हाम्रो नजरमा अति अचम्मको छ’? ४३ त्यसैले म तिमीहरूलाई भन्छु, परमेश्वरको राज्यमा पस्ने मौका तिमीहरूको हातबाट खोसिनेछ र एउटा यस्तो जातिलाई दिइनेछ जसले त्यस राज्यको लागि सुहाउँदो फल फलाउँछ। ४४ साथै, जो यो ढुङ्गोमाथि बजारिन्छ, त्यो चकनाचूर हुनेछ र जसमाथि यो ढुङ्गो खस्छ, त्यो धूलोपीठो हुनेछ।” ४५ जब मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरूले उहाँले भन्नुभएका यी दृष्टान्तहरू सुने, तब उहाँले तिनीहरूकै विषयमा पो भनिरहनुभएको रहेछ भनी तिनीहरूले बुझे। ४६ तिनीहरू उहाँलाई पक्रन चाहन्थे तर भीडसित डराए, किनकि मानिसहरू उहाँलाई भविष्यवक्ता मान्थे।
^ मत्ती २१:९ * शाब्दिक, “होसन्ना,” जसको अर्थ हो, “बचाउनुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौं।”
^ मत्ती २१:२५ * शाब्दिक, “स्वर्गबाट।”